राष्ट्रपति ट्रपको घोषणाविरुद्ध उभियाे नेटो - नेपालबहस
राष्ट्रपति ट्रपको घोषणाविरुद्ध उभियाे नेटो
| १६:१५:५२ मा प्रकाशित
३ मंसिर, काठमाडाैं । उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) का महासचिव जेन्स स्टोल्टेन्बर्गले अफगानिस्तानमा तैनाथ विदेशी सैनिकलाई हतार हतार स्वदेश फर्काइए त्यसबाट अफगानिस्तानको सेनाले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक ठूलो मात्रामा कटौती गर्ने घोषणाप्रति टिप्पणी गर्दै महासचिव स्टोल्टेन्बर्गले उक्त विचार अघि सारेका हुन् ।
उनले अफगानिस्तान अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीको केन्द्रका रुपमा रहने सम्भावना रहेको बताउँदै यहाँबाट पश्चिमा मुलुकभित्र आक्रमणका योजना बन्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। महासचिव स्टोल्टेन्बर्गले सिरिया र इराकमा परास्त भएका आइसीसले अफगानिस्तानलाई आफ्नो केन्द्रका रुपमा उभ्याउन सक्ने खतरा रहेको बताए ।
उनले एक वक्तव्य जारी गर्दै भने, “नेटो गठबन्धनले अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियालाई मद्दत गरेको छ । यस प्रक्रियाको एक हिस्साका रुपमा हामीले ठूलै मात्रामा सैन्य उपस्थितिलाई अफगानिस्तानभित्र सीमित गरिसकेका छौं ।” अफगानिस्तानमा तैनाथ सैनिकको संख्याका बारेमा निरन्तर समीक्षा भइरहेको छ भन्दै उनले भने, “अहिले अफगानिस्तानमा तैनाथ विदेशी सैनिकको संख्या १२ हजारभन्दा कम भइसकेको छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी गैर–अमेरिकी सैनिक छन् ।”
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिकको संख्या निरन्तर कटौती गरिए पनि नेटोले अफगान सैनिकलाई तालिम, परामर्श र सहायताका कार्यलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट गरिसकेको छ । उनले भने, “हामी अफगान सैनिकलाई आगामी सन् २०२४ सम्म मद्दत गर्नेछौं ।” गत महिना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै आगामी क्रिसमस अघि नै चार हजार ५०० सैनिक फिर्ता गरिसक्ने बताएका थिए । तर वरिष्ट सैनिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरुले हतारमा सैनिक संख्या कटौती गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।
यसैबीच, अफगानिस्तानको फर्याब प्रान्तमा भएको बम विस्फोटनमा करामकुल जिल्लाका प्रहरी प्रमुख सफर मोहम्मद बिदार समेत पाँच जना सुरक्षाकर्मी मृत्यु भएको छ । सडक किनारामा बिछ्याइएको बारुदी सुरुङ बुधबार बिस्फोट भएर ती सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । अफगानी मुख्य विद्रोही समूह तालिबान र अफगान सरकारबीच मध्यस्थता वार्ता जारी रहे पनि हिंसा–प्रतिहिंसाका घटनामा कुनै कमी आएको छैन । एएनआई
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका सुरक्षा प्रमुखलाई बर्खास्त गरेका छन् । उनको कार्यकालमा जिम्मेवारी पाएकामध्ये अत्यन्त धेरै सम्मान गरिने व्यक्तिका रुपमा रहेका क्रिस्टोफर क्रेब्ससलाई उनले बर्खास्त गरेका हुन् । हालैको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा धाँधली भएको कुनै ठोस प्रमाण नपाइएको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पको खुलेर आलोचना गरेकै कारण ट्रम्पले क्रिस्टोफरलाई बर्खास्त गरेकाे जनाइएकाे छ ।
उनले कतिपय ठाउँमा धाँधली भएको भन्दै उजुरीसमेत दिएका छन् । ती उजुरीहरुलाई न्यायधीशहरुले खारेज गरिदिएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएको दावी गरेपनि कुनै आधार र प्रमाणहरु भने नदिएको भन्दै उनीहरुले उजुरी खारेज गरिदिएका हुन् । बर्खास्त गरिएका क्रिस्टोफर अमेरिकाको विद्युतीय सुरक्षा र भौतिक सुरक्षा निकायका निर्देशक थिए । उनको बर्खास्तीलाई लिएर अमेरिकामा आश्चर्य प्रकट गरिएको छैन ।
निर्वाचनमा पराजित भएदेखि नै राष्ट्रपति ट्रम्पले उनीप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका थिए । उनले क्रिस्टोफरलाई सुरु देखि नै लक्षित गरेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि पनि आफ्नो कार्यकाल भरीमा दर्जनौं उच्च पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेका थिए । एपी
बुर्किना फासोको राष्ट्रपतिमा काबोर फेरि निर्वाचित १ दिन पहिले
नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पु¥याउन राष्ट्रपतिको आग्रह १ दिन पहिले
नेकपा विवाद : राष्ट्रपतिको मर्यादा र चिनियाँ राजदूतको सक्रियता १ दिन पहिले
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री विरुद्ध अफगानस्तानमा विरोध ७ दिन पहिले
कोरोनाका कारण राष्ट्रपति छठ पर्वमा सरिक नहुने १ हप्ता पहिले
कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप ल्याउने गरी अध्यादेश जारी १ हप्ता पहिले
बालिका यौन दुव्र्यवहार कसुरमा तीन महिना जेल २० घण्टा पहिले
हिमाली क्षेत्रमा यस वर्ष आलु उत्पादन घट्यो १६ घण्टा पहिले
डिपोबाट ढुवानी अनुदानमा उपलब्ध चामल बिक्नै छाड्यो १३ घण्टा पहिले
भारत र अष्ट्रेलियाबीचको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेट शुरु १९ घण्टा पहिले
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा १० मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट राखिने १६ घण्टा पहिले
गुल्मी जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुग्यो १९ घण्टा पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा थप १७०३ जनामा संक्रमण पुष्टि १३ घण्टा पहिले
विश्वभर कोरोनाबाट १४ लाख भन्दा बढीकाे मृत्यु, संक्रमितको संख्या ६ करोड नाघ्यो २ दिन पहिले
वरिष्ठ शल्यचिकित्सक डा मुडभरीको कोरोनाबाट निधन ६ दिन पहिले
धरानमा कोरोना संक्रमित २ जनाको मृत्यु ५ दिन पहिले
महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि कानूनी कारवाहीमा राष्ट्रपतिको जोड ३ दिन पहिले
घाइतेको मृत्यु भएपछि बर्दिवास फेरि आन्दोलित ३ दिन पहिले
नेपाल–भारत सीमानाका अबिलम्ब खुलाउन मन्त्री साहको माग ३ दिन पहिले
वाग्मतीमा पनि गहुँको बीउ अभाव, किसान समस्यामा २ दिन पहिले
शैक्षिक प्रशासनको तालाबन्दी ४३ दिनपछि खुल्यो २ दिन पहिले
के यी सबै “लालगद्धार” नै हुन् त ? १७ घण्टा पहिले
सबैतिर ढकमक्क फुले सयपत्री, तिहारमा फूलको कुनै कमी नहुने ४ हप्ता पहिले
प्रसूतिगृह १ हप्ता पहिले
तनहुँबाट कौडा खेल्ने १६ जना पक्राउ, ४८ हजार बरामद ४ हप्ता पहिले
जिल्ला अस्पताल हुम्लामा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द ५ दिन पहिले
सांसद बस्नेतको आमासहित परिवारका आठ जना कोरोनामुक्त ४ हप्ता पहिले
बालकको स्वास्थ्य परीक्षण ३ महिना पहिले
आउँदो शुक्रबारदेखि सेनाको खेलकूद प्रशिक्षण शुरु हुँदै ५ दिन पहिले
एकैपटक १५७ कैदीबन्दी बिरामी, चिकित्सकको टोली कारागारमा ! १ वर्ष पहिले
अब महिनावारी हुँदा विद्यालयबाट पढ्दापढ्दै भागेर जानु पर्दैन १२ महिना पहिले